Idi Onye na-emepụta ihe na-ebupụta okpomọkụ nke China Mold |Hero-Tech
Kpọtụrụ ekwentị+ 86 159 2005 6387
Kpọtụrụ E-mail sales@szhero-tech.com
Echiche ụlọ mmepụta ihe
Igwe ọkụ ụlọ ọrụ ikuku jụrụ oyi
1/4ton ruo 2ton obere Chiller
米miri jụrụ oyi oyi akwa
Glycol Chiller ikuku jụrụ oyi
米miri jụrụ Glycol Chiller
1/5ton ruo 40ton Glycol Chiller-Piston/Piston
8ton ruo 1000ton Glycol Chiller-Screw Compressor
Igwe ọkụ na ikpo ọkụ
Iju mmiri juru oyi
Chiller na-egbochi mgbawa
Ihe na-eme mmanụ ọkụ
Igwe ọkụ ụlọ ọrụ
Ajụjụ&A onye ọrụ
Ihe njikwa okpomoku ebu
Ụdị ihe mkpuchi mmiri jụrụ oyi
Igwe oyi dị ala nke jụrụ oyi
Ngwaahịa Okwu Mmalite MTC bụ tumadi n'ọrụ iji belata ebu Preheating oge, ịchịkwa ebu okpomọkụ, gbochie eruba akara, ma ọ bụ ndị ọzọ na-adịghị mma phenomena na kpụrụ n'elu, ịchịkwa mgbe nile okpomọkụ.Ngwa Plastic & Rubber Industry Die nkedo ụlọ ọrụ: Zinc, Aluminom, na Magnesium.Na-adabere na ya, na-agbanwe agbanwe, dị elu-arụmọrụ jụrụ oyi.HERO-TECH chillers na-ebuga uru n'ọtụtụ ngwa dị iche iche yana nhọrọ arụmọrụ ike emelitere.Atụmatụ imewe-Sistemụ kọmputa...
mbukota na iga
A na-eji MTC eme ihe iji belata oge ikpo ọkụ ebu, na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ, gbochie akara eruba, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adịghị mma na elu akpụ akpụ, na-achịkwa okpomọkụ mgbe niile.
Ụlọ ọrụ nkedo anwụ: Zinc, Aluminom na Magnesium.
Na-adabere na ya, na-agbanwe agbanwe, dị elu-arụmọrụ jụrụ oyi.
HERO-TECH chillers na-ebuga uru n'ọtụtụ ngwa dị iche iche yana nhọrọ arụmọrụ ike emelitere.
-Microcomputer usoro nakweere, PID auto okpomọkụ njikwa, ike ịchịkwa mmanụ na mmiri okpomọkụ n'ime ± 1 ℃.
- igwe anaghị agba nchara kpo oku gbọmgbọm, atụmatụ ngwa ngwa kpo oku na jụrụ, mfe ihicha.
- okpomọkụmgbapụta na elu arụmọrụnakweere,
atụmatụ elu nrụgide, nnukwu eruba, obere mkpọtụ na elu kwụsie ike.
- Kọmpat,设立了siriike na ntụ ntụ nwere ọdịdị mara mma, akụkụ ntọhapụ ngwa ngwa na-enye nlekọta dị mfe.
-Ekebere na oti mkpu na Multi mmejọ egosi, mgbe mmejọ mere, mkpu ga-ada na-akpaghị aka, mmejọ koodu gosiri, ahịa ga-ama mmejọ na ihe mere na oge mbụ, na aka na oge, nke bụ na-ekwe nkwa na usoro na-agba ọsọ nchekwa.
-Edobere ya na ngwaọrụ nchebe usoro nke usoro, ngwaọrụ nchebe dị mkpụmkpụ, ngwaọrụ nchebe ọkwa mmiri, oge ịgbagharị eletrik, wdg.
-Processional Team: Engineering otu na nkezi 15 afọ nke ahụmahụ na ulo oru refrigeration, sales otu na nkezi 7 afọ ahụmahụ, Service otu na nkezi 10 afọ ahụmahụ.
A na-enye ngwọta ahaziri ahazi mgbe niile dị ka achọrọ.
-3 usoro njikwa mma: njikwa mma na-abata, njikwa mma usoro, njikwa mma na-apụ apụ.
-12 ọnwa nkwa niile ngwaahịa.N'ime akwụkwọ ikike, nsogbu ọ bụla kpatara ntụpọ chiller n'onwe ya, ọrụ enyere ruo mgbe edozichara nsogbu ahụ.
Uru anọ nke HERO-TECH
• ike ika: Anyị bụ ndị ọkachamara na n'elu soplaya nke ulo oru chiller na 20 afọ ahụmahụ.
• Ọkachamara Nduzi: Ọkachamara na ahụmahụ technician & sales otu ọrụ na esenidụt ahịa, àjà ọkachamara ngwọta dị ka chọrọ.
• Ndị ọrụ kwụsiri ike: Ndị ọrụ kwụsiri ike nwere ike hụ na nrụpụta kwụsiri ike ma dị elu.Iji hụ na ọrụ dị elu na nkwado ọrịre ahịa dị mma.
• Ọrụ ọla edo: nzaghachi oku ọrụ n'ime awa 1, ngwọta a na-enye n'ime 4hrs, yana nrụnye na nrụzi nke onwe ya.
Nke gara aga:Ihe na-eme mmanụ ọkụ
Osote:Igwe ọkụ laser
Ọkụ na-ebufe ọkụ
Oke okpomọkụ ℃
Ike ikpo ọkụ kw
Isi iyi ike
Condenser Ike moto kw
Oke eruba L/min
Oke nrụgide Kg/cm2
Dayameta njikọ Njikọ inch
Ọnụọgụ ntinye & ntinye
Ọkụ mmiri jụrụ oyi inch
Akụkụ Ogologo mm
Nha ịbụ kg
Cheta na: Mmiri mmiri kwesịrị ibu karịa 2kg / cm2 mgbe mmiri ụdị ebu
onye na-ahụ maka okpomọkụ jikọtara na mmiri mgbata.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla chọrọ, biko mee ka anyị mara.
Anyị debere ikike ịgbanwe nkọwapụta na-enweghị ọkwa ọzọ.
Q1: Ị nwere ike inyere anyị aka ịkwado ihe nlereanya maka ọrụ anyị?
A1: Ee, anyị nwere engineer ịlele nkọwa ma họrọ gị ihe nlereanya ziri ezi.Dabere na ihe ndị a:
1) Ike oyi;
2) Ọ bụrụ na ị maghị, ị nwere ike ịnye ọnụego eruba na igwe gị, okpomọkụ na okpomọkụ site na iji akụkụ gị;
3) Okpomọkụ gburugburu;
4) Ụdị refrigerant, R22, R407c ma ọ bụ ndị ọzọ, pls dokwuo anya;
6) Ụlọ ọrụ ngwa;
7) mgbapụta mgbapụta na nrụgide chọrọ;
8) Ọ bụla ọzọ pụrụ iche chọrọ.
Q2: Kedu ka ị ga-esi hụ na ngwaahịa gị dị mma?
A2: Ngwaahịa anyị niile nwere asambodo CE yana ụlọ ọrụ anyị na-agbaso usoro njikwa ogo ISO900.Anyị na-eji ngwa ama ama ama ama n'ụwa niile, dị ka DANFOSS, COPLAND, SANYO, BITZER, HANBELL compressors, ihe eletriki eletriki Schneider, DANFOSS/EMERSON friji.
A ga-anwale nkeji ndị ahụ n'ụzọ zuru ezu tupu ngwugwu na a ga-enyocha nke ọma nke nkwakọ ngwaahịa ahụ.
Q3: Gịnị bụ akwụkwọ ikike?
A3: 1 afọ akwụkwọ ikike maka akụkụ niile;Ndụ dum na-arụ ọrụ n'efu!
Q4: Ị bụ onye nrụpụta?
A4: Ee, anyị nwere ihe karịrị 23 afọ na ụlọ ọrụ refrigeration azụmahịa.Ụlọ ọrụ anyị dị na Shenzhen;Nnọọ ileta anyị n'oge ọ bụla.Nweekwa patent na imewe chillers.
Q5: Kedu ka m ga-esi nye iwu?
A5: Ziga anyị ajụjụ site na email: sales@szhero-tech.com, kpọọ anyị site na nọmba Cel +86 15920056387 ozugbo.
Adreesị: Ụlọ 34, Dayangtian Industrial Mpaghara, Wanfeng, Shajing, Bao'an, Shenzhen
Ekwentị: +86 159 2005 6387
Ajuju Maka Ahịa
米kparịta ụka WhatsApp n'ịntanetị!